Burmese Online News – Burmese Online News
Home > Burmese Online News
Author: Burmese Online News
လက်ရှိကာလအတွင်း တစ်ရက်ကို YBS စီးနင်းသူဦးရေ သုံးသိန်းဝန်းကျင်ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ YBS ယာဉ်လိုင်းတွေအပေါ်မှာ ခရီးသွားတွေ မကျပ်စေဖို့အတွက် ရုံးတက်ရုံးဆင်းချိန်တွေကို မတူညီအောင် သတ်မှတ်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားနေချိန်ကာလအတွင်း မဖြစ်မနေ ရုံးတက်ရုံးဆင်းလုပ်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ YBS ယာဉ်လိုင်းတွေပေါ်မှာ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်းစီးနင်းရတဲ့အခြေအနေမျိုးကင်းဝေးစေဖို့အတွက် ရုံးချိန်များကို တပြိုင်နက်တည်းမသတ်မှတ်ပဲ မတူညီအောင်သတ်မှတ်သင့်တယ်လို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ မှတ်ချတ်ပြုပြောကြားခဲ့တာပါ။ အတိုင်ပင်ခံရဲ့အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ YBS ယာဉ်လိုင်းကို ပုံမှန်စီးနင်းသူအဖြစ် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တဲ့ မနိုင်းနိုင်းက နေ့စဉ် ရုံးတက်ရုံးဆင်းမှာ လုပ်ငန်းတွေက အကြို/အပို့ကားတွေစီစဉ်ပေးသင့်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ရာမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံက သဘောတူခဲ့ပြီး နောက်ထပ်ဖြေရှင်းနည်းအနေနဲ့ ရန်ကုန်မှာ ကုမ္ပဏီ၊ အလုပ်ရုံတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ရုံးတက်ရုံးဆင်းချိန် မတူညီအောင်သတ်မှတ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေ YBS ပေါ်မှာ စုပြုံပြီး မရှိနေဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ အကြိုအပို့ကားတွေစီစဉ်ပေးသင့်ကြောင်းကိုလည်း အများသုံးYBS ဘတ်စ်ကားများစီမံခန့်ခွဲရတဲ့...
မီတာရာဇဝင်ကို တုတ်ထမ်းပြောရတယ်ဗျ၊ အရင် ကတည်းက လွှတ်တော်အမတ်တွေ တွေ့ဆုံပွဲမှာ (အီးပီစီ အင်ယာ ပါလာရင်) ကျွန်တော် ထထပြောတာ။ ထားတော့၊ အဲဒီ အကြောင်း နောက်မှ ပြောမယ်။ အခုက မီတာခ လျော့တဲ့အကြောင်း စပြောရအောင်။ မီတာခက အခြေခံ လူတန်းစား မသုံးမဖြစ် သုံးရတဲ့ ပမာဏကို ဈေးလျော့ကောက်ပြီး နည်းနည်း ဇိမ်ခံဖို့ဘက် ရောက်လာလေလေ ဈေးတင်လေလေ လုပ်ထားတာ။ ယူနစ် ၃၀ ထိ သုံးဆယ့် ငါးကျပ်၊ ယူနစ် ၃၀ကနေ ၅၀ အထိ ငါးဆယ်ကျပ် စသဖြင့်ပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် သူတို့သည် ရမ်းကောက် အဆင့်ပဲ။ ဥပမာ အခြေခံ လူတန်းစားဟာ မီးချောင်း၂၊ မီးဖို၁၊ မီးပူ၁၊ ပျမ်းမျှ သုံးရင် တလ ယူနစ် ဘယ်လောက်ကျလဲ တွက်မထားဘူး။ ဒီတော့...
အခြေခံပညာကျောင်းများအား ၂၀၂ဝပြည်နှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ရန်ရှိသဖြင့် နေပြည်တော် ကောင်စီ အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်များအတွင်း Community Based Facility Quarantine ဖွင့်လှစ်ထားသော ကျောင်း ၆၀၂၁ ကျောင်းအား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း၍ ဇွန် ၁၅ ရက်အပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံးက မေ ၁၃ ရက်တွင် အကြောင်းကြားစာ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ “စာအရဆိုရင်တော့ ဇူလိုင် ၁၅ရက်နောက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပေါ့။ အဆင်သင့်ဖြစ် နေအောင် ကော်မတီက ညွှန်ကြားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီစာကို ခုနကမှ လိုင်းပေါ်ကနေ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီတော့တရားဝင် စာမရောက်သေးဘူး’’အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမောင်ဝင်းကပြောသည်။ နေပြည်တော်ကောင်စီ အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များအတွင်း Community Based Facility Quarantine ဖွင့်လှစ်ထားသော...
ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့တေးသံရှင် မီးမီးခဲဟာ ကင်ဆာရောဂါ အဆင့်(၄)နဲ့ ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့ ကင်ဆာရောဂါရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေနေကတော့ (၃)လကို(၁)ကြိမ်ဆေးစစ်ကာဆေးကုသမှုခံနေ ရတာပါ ။ မကြာသေးမီကမှ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမေလ (၉)ရက်နေ့လေးမှာ ဆေးရုံလာဆင်းလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ တေးသံရှင် မီးမီးခဲနဲ့ ထူးအယ်လင်တို့ကတော့ တစ်ချိန်က ပရိသတ်တွေအားလုံး အားကျခဲ့ရတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်စုံတွဲဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ စုံတွဲသီချင်းတွေဟာ ပရိသတ်တွေကြားမှာအတော်လေး ရေပန်းစားအောင်မြင်ခဲ့တာပါ ။ သူတို့စုံတွဲဟာလည်း သာမန်စုံတွဲတွေလိုပဲ အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြောင့် နှစ်ဦးသဘောတူ ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြပြီး သီးခြားကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘဝလေးတွေကို ထူထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာ မီးမီးခဲတစ်ယောက် ကင်ဆာရောဂါကြောင့် မကြာခဏ ဆေးရုံတက်ပြီးကုသမှုခံယူနေရစဉ်မှာတော့ ထူးအယ်လင်တစ်ယောက် သံယောဇဉ်လက်ကျန် .. ကျန်းမာပါစေကွယ် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ မီးမီးခဲရဲ့ ပုံလေးကို သူ့ရဲ့မိုင်ဒေးကနေတဆင့် ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ် ။ တစ်ယောက်ဆီကိုယ်ပိုင် ဘဝတွေတည်ဆောက်ခဲ့ကြပေမယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထက် ပိုခိုင်မြဲတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေကတော့ ရစ်တွယ်နေတုန်းလို့ ဆိုရမှာပါ ။ တစ်ချိန်က ဇနီးဟောင်းဖြစ်တဲ့...
ကိုဗစ်ကို ရတဲ့နည်းနဲ့ တွန်းလှန်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ရင်ထဲက အမှန်တရားစကားများ… ဘုန်းတော်ကြီးတွေကပြောတယ် “လူတွေဒုက္ခရောက်နေပြီ၊ ရအောင်ကယ်ကိုကယ်မယ်”တဲ့…. ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောတယ် “ကျမတို့အစိုးရကတော့ ပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီး အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်သွားဖို့ သန္နိဌာန်ချထားပါတယ်…. တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်းနဲ့ ပြည်သူအားလုံး ကျမတို့ကို ကူညီပေးကြပါ” တဲ့… ဆေးဝန်ထမ်းတွေကပြောတယ် “ငါတို့သေကာမှသေရော၊ လူနာတွေတော့မသေစေရဘူး”တဲ့…ဝန်ထမ်း‌တွေကပြောတယ် “ငါတို့ကူနေတာတွေ မီဒီယာမှာမပါလည်း အရေးမကြီးပါဘူးကွာ၊အားလုံးအဆင်ပြေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်”တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကပြောတယ် “စည်းစိမ်ဟာပြန်ရှာလို့ရတယ်၊ ငါတို့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတာတော့ ကြည့်မနေနိုင်ဘူး”တဲ့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တွေ ကပြောတယ် “စောင့်ကြည့်လူနာတွေနေဖို့ခက်ကုန်ပြီ၊ ဒို့ ဟိုတယ်တွေယူသုံးလိုက်ပါ”တဲ့.. ပရဟိတသမားတွေကပြောတယ် “မောနေပြီ ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူး၊ ပြည်သူပြည်သားတွေငတ်မှာတော့ ထိုင်မကြည့်နိုင်ဘူး၊ ရှိတဲ့အား တော့သုံးရမှာပဲ”တဲ့၊ ရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ စက်ကရိယာတွေတီထွင်နေတဲ့ လူငယ်‌လေးတွေကပြောတယ်~ ထမင်စားချိန်မမှန်တာအရေးမကြီးဘူး၊ ဒါလေးအောင်မြင်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေပြီ”တဲ့.. အသက်ရှုစက်အတွက် လုံးပမ်းနေတဲ့ ဆရာတွေကပြောတယ်~ “အိပ်ချိန်မရှိသလောက်ပါပဲ၊ ဒီစက်လေးရရင်လူနာတွေအသက် ရှုနိုင်ပါစေတော့”တဲ့…၊ အဆိုတော်တွေ ကပြောတယ်...
ကိုဗဈ-၁၉ ကွောငျ့ Mask တပျတာဟာ တကမ်ဘာလုံးမှာ ယဉျကြေးမှုတဈခုလိုဖွဈလာခဲ့ပွီး WHO အပါအဝငျ ကနျြးမာရေးအဖှဲ့အစညျးမြားအားလုံးကလညျး အပွငျထှကျမယျဆိုရငျ မဖွဈမနေ Mask အသုံးပွုဖို့ တိုကျတှနျးနှိုးဆျောထားပါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားဟာ ကူးစကျခံရမှာကွောကျတဲ့အတှကျကွောငျ့ လူထူထပျတဲ့နရောတှကေိုသှားမယျဆိုရငျ မဖွဈမနေ mask ကို တပျဆငျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုအသုံးပွုတဲ့နရောမှာ မှနျကနျသောနညျးလမျးနဲ့ တပျဆငျရမှာဖွဈသလို၊ လှဲမှားစှာအသုံးခခြဲ့ပါက ရောဂါကူးစကျခံရမညျအပွငျ တခွားမလိုလားအပျသညျ့ ကနျြးမာရေး ပွသာနာတှပေါ သခြောပေါကျကွုံတှရေ့မှာပါ။ ကိုဗဈ-၁၉ ကို မှေးဖှားပေးခဲ့တဲ့ တရုတျနိုငျငံ၊ ဝူဟနျပွညျနယျမှာတော့ ခပျဖှဖှပွေးတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျး (Jogging) လုပျတဲ့ အသကျ ၂၆ နှဈအရှယျ တရုတျအမြိုးသား မစ်စတာရှနျဖငျြး(နာမညျလှဲ) က maskကို လှဲမှားစှာ အသုံးခခြဲ့တာကွောငျ့ ဆေးရုံတကျရောကျပွီး ဆေးကုသမှုခံယူနရေပါတယျ။ ဒီအကွောငျးလေးကို အသေးစိတျဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။ mask တပျရတာဟာ အသကျရှူကပျြသလို၊ အခြိနျကွာလာသညျ့နှငျ့အမြှ သကျတောငျ့သကျသာမဖွဈသောကွောငျ့ တခြို့သောလူမြားဟာ အပွငျထှကျရငျတောငျ mask...
ရန်ကုန်အခြေစိုက် အွန်လိုင်း သတင်းဌာန တစ်ခုက ရုပ်သံ သတင်းသမားတစ်ဦး ဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ အဲဒီ့သတင်းသမားနဲ့ အတူ အလုပ်အတူလုပ် တဲ့ HEAR Myanmar က ရုပ်သံ သတင်းထောက်တစ်ဦးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ရုပ်သံသတင်းထောက် နဲ့ အနီးကပ် ထိတွေ့သူတွေဖြစ်တဲ့ HEAR Myanmar သတင်းဌာနက ရုပ်သံသတင်းထောက်နဲ့ အယ်ဒီတာ စုစုပေါင်း ၇ ဦးခန့်ဟာ အခုအခါ မှာ အစိုးရက သတ်မှတ်ထားတဲ့ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် အမရာဆောင် မှာ အသွားအလာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့် ခံနေ့ရတယ်လို့လည်း အဲဒီ့သတင်းထောက်က ပြောပါတယ်။ ကူးစက်ခံရတဲ့ ရုပ်သံ သတင်းသမားဟာ လူနာအမှတ် ၁၇၉ ဖြစ်ပြီးတော့ ခဝဲခြံ ၂ လမ်းက လူနာအမှတ် ၁၇၇ ဆီက ကူးစက်ခံရတယ်လို့လည်း ကျန်းမာရေးနဲ့...
မေ ၁၈ ရက်တွင် Grade-4 နှင့် Grade-7 ဆရာကိုင် သင်ရိုးသစ် အွန်လိုင်းသင်တန်းများကို တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများအား ပို့ချပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထိုရက်တွင် သင်ရိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အများသူငှာသိရှိစေရန် မီဒီယာများ မှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဟု အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။ မေ ၁၁၊ ၁၂ရက်နှင့် ၁၅ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဦးဝင်းမော်ထွန်းနှင့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း တစ်ခုလျှင် ဆရာ၊ဆရာမ ၆ဦး စုစုပေါင်း ဦးရေ ၁၀၀ ကျော်ဖြင့် Myanmar Digital Education Platform (MDEP)ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အွန်လိုင်း ဝက်ဘ်ဆိုက် အသုံးပြုပုံ၊ DBE Boxမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုပုံ၊ သင်ယူမှု၊ သင်ကြားနည်းပညာများနှင့် အခြားအခက်ခဲများအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဆရာ၊ဆရာမများဘက်မှ တင်ပြလာသည့် အချက်များအား ပြင်ဆင်ပြီးပါက...